I-Realme GT, ifuna ukophula umnyango weziphelo eziphezulu [Uphengululo] | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UMiguel Hernandez | | Izaziso, Reviews
Njengoko usazi kakuhle, besisebenza kunye Realme okoko yafika ngokusesikweni eYurophu, xa sasiya kumnyhadala wedama lokuqala eMadrid kwaye safumana umbono wobukhulu beengcinga zikaReal ukuze sizame ukuba «ngumtshintshi womdlalo» ngokomgangatho kunye nexabiso lemveliso .
INewme GT entsha ifika ineziphelo eziphezulu kunye nexabiso elifanelekileyo lokuzibeka njengokhetho oluhle kule 2021. Makhe sijonge nzulu kule Realme GT intsha, amanqaku ayo kwaye ukuba ngenene esi siginali Realme iyakwazi ukumelana ne-Samsung, iApple kunye neOppo apho bazikhusela kakuhle khona, iifowuni "eziphezulu".
Njengesiqhelo, sikushiya ividiyo ephezulu apho uya kuba nakho ukujonga uhlalutyo lwethu, kuba besele siyivavanya le Realme GT iiveki ezimbalwa.
1 Uyilo lwe brand
2 Iimpawu zobugcisa: Ngaba kukhona into esiyiphosayo?
3 Ukuboniswa kunye namava emultimedia
4 Ukuzimela kunye nokufota
5 Izigqibo zethu
Uyilo lwe brand
I-Realme ithathe isigqibo sokubheja kuyilo olwaziwa ngokwaneleyo ukuba luyazi ukuba sijongana nesixhobo sokutyikitya, kodwa senze kakuhle ngokwaneleyo ukuze sizive siphambili. Sineemiphetho ezijikeleziweyo, ifreyimu elingisa isinyithi, kunye neglasi ebuyela ngasemva. Singayifumana kwiintlobo ezintathu eziphambili zesilivere / ikristale, tyheli neli qela limnyama linomtsalane elisikhumbuza ngokubulala uBill, kwaye ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ubonakalisiwe. Njengesiqhelo, icandelo elingasemva linomnqweno okhethekileyo wokubamba iingoma zethu.
Esandleni sam, inguqu etyheli eyenziwe ngesikhumba se-vegan iyamangalisa, ukujija okunomdla okuvelisa iimvakalelo ezixubeneyo xa ndifumanisa ukuba isakhelo senziwe ngeplastiki.
ESpain inokuthengwa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka
Sinobukhulu be-158 x 73 x 8,4 ubunzima obulula kakhulu be ziigram ezili-186 kuphela, into eyothusayo ithathela ingqalelo iphaneli ephantse ibe zi-intshi ze-6,5. Esandleni siziva silungile ngokumangalisayo nangobukhulu baso. Ngaphambili sineklasikhi "freckle" kwindawo ephezulu yasekhohlo eyenza ikhamera ye-selfie yokusetyenziswa okukhethekileyo kwescreen. Njengesiqhelo, sinetyala elikhuselayo elifakwe ebhokisini, into esoloko ifumaneka ngokufanelekileyo.
Iimpawu zobugcisa: Ngaba kukhona into esiyiphosayo?
Ngokucacileyo siqaqambisa i-Qualcomm Snapdragon 888 5G eyaziwayo, eya kukhatshwa yinguqulelo ye-8 okanye ye-12 GB ye-LPDDR5 RAM kunye nokugcinwa kwesona santya siphezulu nge-128 okanye i-256 GB yememori ye-UFS 3.1 ephucula kakhulu ukuhanjiswa kwedatha.
Ukucaciswa kobuchwephesha kwiReal GT
Inkqubo yokusebenza I-Android 11 + i-Realme UI 2.0
Isikrini I-SuperAMOLED 6.43 "FHD + (2400 * 1080) ene-120 Hz yokuhlaziya inqanaba kunye ne-1000 nits
Inkqubo I-Qualcomm Snapdragon 888 5G
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128/256 UFS 3.1
Ikhamera esemva I-Sony 64MP f / 1.8 IMX682 + 8MP UGA 119º f / 2.3 + 2MP iMacro f / 2.4
Ikhamera yangaphambili 16MP f / 2.5 GA 78º
Conectividad I-Bluetooth 5.0-5G ye-DualSIM- i-WiFi 6 - i-NFC-IR-i-GPS ezimbini
Ibhetri I-4.500 mAh ngeNtlawulo ekhawulezayo ye-65W
Sine-WiFi 6 kunye ne-5G amandla kunye ne-Dual SIM system oko ngokungathandabuzekiyo kuya kuyonwabisa eyona inzima. Kuvavanyo lwethu iqondo lobushushu lilawulwe kakuhle ngenxa yombulelo Inkqubo yokuchithwa kwe-VC efakwe yiRealme kwisiphelo sayo, elinye lamacandelo asothuse kakhulu.
Uvavanyo lwethu ekusebenzeni Smart 5G Banqunyelwe ngokunikwa ukunqongophala kolu hlobo lokugubungela ngexesha lohlalutyo.
Ukuboniswa kunye namava emultimedia
Sinepaneli Phantse i-6,5-intshi iSuperAMOLED ihambisa ukukhanya kwe-1000 yenits kwaye kufanelekile ngokufanelekileyo ngokwamava ethu okusetyenziswa. Sinefayile ye- I-120 Hz yokuhlaziya inqanaba okuchaphazela ngokucacileyo ukusetyenziswa kwenkululeko. Ixabiso lokuhlaziya iphaneli yokuchukumisa yi-360 Hz ke kulo mbandela amava aphezulu. Ukulawula ukukhanya kunye nokwandisa ukuzimela, iRealme ibeke izivamvo ezimbini zokukhanya kwaye inyani kukuba zingqina ukuphendula ngokufanelekileyo kwiimfuno zesibane. Inkqubo ye- Ukusetyenziswa kwescreen kuthinta iipesenti ezingama-92 kwaye kweli candelo iRealme GT iphumelele kakuhle.
Amava ethu ayathandeka, Kwangokunjalo, ngokwesandi, sifumene amandla aneleyo kunye nokucaca ukuze sikwazi ukonwabela ukusetyenziswa kwayo ngaphandle kokungabikho "kobuchwephesha" kwesandi sestereo.
Ukuzimela kunye nokufota
Ngokubhekisele kwibhetri, Iphakamisa i-4.500 mAh ngentlawulo ekhawulezileyo ebolekwa yiRealme kwiOppo, sine65W ngetshaja yeSuperDart ebandakanyiweyo ebhokisini. Oku kusivumela ukuba sisuke I-0% ukuya kwi-100% kwimizuzu nje engama-35, Kubonakala ngathi ukubheja okunomdla ngala maxesha. Isiphelo sendlela ke sithatha ithuba lokuzimela kweempawu zokuphucula ukusebenza, zombini ukunciphisa ukuqaqamba kunye nenqanaba lokuhlaziya, iindlela ezahlukeneyo zokonga kunye nentlawulo ebuyiswayo nge-USB-C OTG enesiphumo se-2,5W. Kwiimvavanyo zethu, ukuzimela kuye kwafikelela kusuku okanye kusuku olunesiqingatha lokusetyenziswa ngaphandle kweengxaki, nangona silawula ibango kwimidlalo yevidiyo kunye nenqanaba lokuhlaziya kwesikrini.
Ngokubhekiselele kubenzi boluvo, Kungekudala siza kukuzisa uhlalutyo olunzulu lwekhamera ngovavanyo olupheleleyo, ngeli xesha "sivula umlomo wakho" kunye nokubalulwa kwayo kunye nokubonakala kwethu kokuqala:
Isoftware ephambili ye-Sony IMX682 ene-64MP kunye ne-f / 1.9 yokuvula iziqwenga ezithandathu
I-8MP ye-Ultra Wide Angle Sensor enamaqhekeza amahlanu f / 2.3 ukuvula
Inzwa ye-2MP yeMacro eneziqwenga ezithathu f / 2.4 ukuvula
Sinezinto ezisebenzayo ezinje nge Imo Super Night esiza kuthetha ngayo kuvavanyo lwethu olunzulu, sinethemba lokuba awuzukuyiphosa. Sinokurekhoda ividiyo ukuya kuthi ga kwi-4K 60 FPS ngozinzo lwayo oluqhelekileyo.
Le Realme 5G inyanisekile kwisiphelo esingaswele nto, siphoswa kukutshaja ngaphandle kwamacingo kweQi, asizukuziqhatha, kodwa kubonakala ngathi kuphela kwenkcukacha ezahlulahlula isiphelo "sePrimiyamu". Amava e-Realme UI agutyungelwe yi-bloatware ethile esiyilungisileyo kuseto, Kodwa ukusebenza kwinqanaba lesantya kunye nawuphi na umdlalo onzima okanye umsebenzi oqhelekileyo unobundlobongela. Ifowuni nayo ayifudumezi, into ebisenzeka ngeli xesha nezinye iiterminal.
Bendinethemba elincinci ngalo "mbulali ubalaseleyo" esiye simve minyaka le, kodwa inyani yile yokuba ngexabiso lebhendi yale Realme GT, Ndikufumanisa kunzima ukubheja kwezinye iindlela ezivela kwi-Samsung nakwabanye abavela kwiXiaomi. U-Realme uzibophelele ngokuzimisela kuluhlu "oluphezulu" kule GT, Ngaba umdlalo uza kuhamba kakuhle? Kusafuneka senze "uvavanyo lomqhaphu", uvavanyo lwekhamera apho ngokuqinisekileyo siya kufumanisa ukuba le Realme GT ingathetha ngawe kuwe kwi-iPhone 12 Pro okanye kwi-Galaxy S21 Ultra. Ungalahli iinkcukacha zewebhusayithi yethu kunye nejelo le-YouTube kuba uya kuva kuthi kwakamsinya.
I-Relalme GT 5G> AMAXABISO
I-8 + 128: 449 i-euro ngesipho (i-499 euro esemthethweni)
I-12 + 256: 499 i-euro kunye nesibonelelo (i-549 euro esemthethweni)
Siza kuba nokunikezelwa okukhethekileyo kwiAmazon, iwebhusayithi yeRealme Kwaye kwi-AliExpress kude kube nge-22 kaJuni, hlala ubukele.
Ukwakhiwa kwezinto ezintsha kunye nezixhobo ziziva zi-premium
Amandla amaninzi kunye nesantya ngaphandle kokufudumala
Ukutshaja ngokukhawuleza kuhle
Ixabiso eliqhelekileyo eliqhelekileyo eliphakathi / eliphezulu
Ikhamera iyahluka kodwa inokuphuculwa
Akukho mrhumo Qi
Ezinye iibloatware kwiRealme UI 2.0
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » I-Realme GT, ifuna ukudiliza umnyango weziphelo eziphezulu
Izicelo ezi-6 ezilungileyo zokuthatha amanqaku kwi-Android